Maxaad Ka Taqanaa Bariis Isku Karis Soomaaliyeed? |
Fahanka Shaqsi iyo Daruufaha Kugu Xeeran!
Maxamed Cabdirisaaq Diriye, January 22, 2019
Tuke Somalism — September 10, 2015
Kusoo dhawaada waa markalle iyo barnaamijkii cunta karinta ee aad kalla socotaan Machadka afkaarta Joogtada Ee Ganacsiga Iyo Bulshada. Maanta waxaan karinaynaa bariis isku karis ah, waxaan isticmaaleynaa bariiska loo yaqaano bariis mati.
Marka horre waxaa lagu bilaabayaa dhaqidda bariiska. Waa inaad dhaq-daan bariiska illaa ay biyaha saafi ka noq-daan. Dhaq illaa 3 daqiiqo ama 4 daqiiqo. Bariiska illaa 1 saac la dhig biyo.
Waxaa kalle oo aan isticmaaleynaa hilib ari. Dadka qaar ayaa isticmaallo fiyinjeer, haddii aad isticmaalayso fiyinjeer waxaad sameysaa si fiican iskeega dhaq hilibka, barafka kaga dhaq biyo kulul si nadiif u noqoto cuntadaada.
Intaas kadib waxaad u baahantahay:
Inaad jar-jarato basal, hal koob oo saliid ah, iyo 3 qorfe ah
Waxaad kalle oo aad ku dareysaa
5 xabo oo tuun shiidan ah
8 xabo oo heyl ah
8 xabo oo dhagayare ah
Intaas markaad sameyso waxaad ku rideysaa hillib ariga, kadib is dhex qaadsii oo ku dar 3 qaando oo maraq dijaaj ah oo si fiican isku dhex qaadsii kadibna, ku dar xawaashka 1 qaando oo mid yar-yar ah. Si fiican mar kalle u walaaq .
Wax yar ha isku kareen, kadib ku dar 3 yaanyo oo la shiiday, hadana mar kalle is dhex-qaadsii kadibna dabool illaa 2 saacadood dabka dhex-dhexaad ka dhig. Haddii aad isticmaasho makiinada STOVE-ka heerarka dhex-dhexaadka ka dhig.
Intaa kadib daboolka ayaad ka qaadeysaa caraf ku dar iyo 2 koob oo biyo kulul ah. “1 koob kaste oo bariis ah wuxu u baahanyahay 2 koob oo biyo ah”
Daboolka saar oo kari illaa hal saac iyo bar si uu hilibka aad ugu jilco intaasna kadibna ku shub bariiska markaad biyaha ka miirto. Waxaad ku daraysaa bariiskii kadibna waad isku walaaqaysaa. Kadibna illaa 10 daqiiqo camal ayaad u sugaysaa. Bariis matiga qaabkaas ayaa loo kariyaa, hadda waa diyaar oo waad cuni kartaa bariiskaada haddii aad qaabkaas u kariso.
Next post Yaa Sameeyay Ururada Argagixisada?
Previous post Maxaad Ka Taqanaa Weeraryahanka Ugu Fiican Ingiriiska?